၁.၂၀ လီတာစွမ်းရည်၊ သွန်းထားသောအလူမီနီယမ် nonstick ဒယ်အိုးသည်အနက်ရောင် non-stick oil coating ဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ခန့်အပ်တာဝန် (၃၀-၇၂၀ မိနစ်)၊ insulator တွင်လည်းလက်ကိုင်နှင့်အတူ Tempered ဖန်အဖုံး, ဆီလီကွန်တံဆိပ်ခတ်နှင့်အတူ PP ဦး ထုပ်။ အပူပြားနှင့်အဓိကကိုယ်ခန္ဓာ၊ မီးဖို (Tritan ပစ္စည်း) အတွက်ကြော်ရန်ဒယ်အိုး။ အဆင့်မြှင့်ထားသောအပူပေးစနစ်သည်အပူချိန်တည်ငြိမ်။ တစ်သားတည်းဖြစ်စေသည်။ ပြီးတော့လျှပ်စစ်ထမင်းပေါင်းအိုးကဆက်ပြီးအပူပေးပြီးအအေးကောင်းကိုချက်ပြုတ်ရန်သင့်အပူချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားချိန်မှာဆက်ထိန်းထားပေးမှာပါ။ ပြီးတော့ဟင်းချက်ရန်လွယ်ကူသောနေ့လည်စာအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောဗို့အား 220V 60Hz;
အသားတင်အလေးချိန် 2.45kg / PC
ထုတ်ကုန်တိုင်းတာခြင်း (L x W x x H) mm mm 256x1 66x173 (mm)
ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ရာဘာနက်၊ ပါဝါကြိုး (0.9m)
အိုးပစ္စည်းများ အနက်ရောင် non-stick ရေနံနှင့်အတူသွန်းလောင်းသောလူမီနီယံ
ခန့်အပ်တာဝန် ၃၀-၇၂၀ မိနစ်
1. 1.2L ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်း
စွမ်းဆောင်ရည်မှာ ၁.၂၀ လီတာအလူမီနီယံဖြစ်ပြီးအနက်ရောင် non-stick oil coating; ခန့်အပ်တာဝန် (၃၀-၇၂၀ မိနစ်)၊ insulator တွင်လည်းလက်ကိုင်နှင့်အတူ Tempered ဖန်အဖုံး, ဆီလီကွန်တံဆိပ်ခတ်နှင့်အတူ PP ဦး ထုပ်။ အပူပြားနှင့်အဓိကကိုယ်ခန္ဓာ၊ မီးဖို (Tritan ပစ္စည်း) အတွက်ကြော်ရန်ဒယ်အိုး။
လျှပ်စစ်ဒယ်အိုး skillet ထောက်ခံချက်သည်ကြော်၊ ကင်၊ ပူအိုး၊ ပြုတ်၊ မီး၊ တစ်မျိုးတည်းသောလျှပ်စစ်စွမ်းရည်တစ်ခုသည်မီးဖို (၆) မျိုးအစားလုပ်နိုင်သည်
မီးခိုးငွေ့နှင့်အပူချိန်ညီမျှသောအပူချိန်တူသောစက္ကန့် ၆၀ ကြာကြာအောင်စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုအပ်ပါ။ အဆင့်မြှင့်ထားသောအပူပေးစနစ်သည်အပူချိန်တည်ငြိမ်။ တစ်သားတည်းဖြစ်စေသည်။ ပြီးတော့လျှပ်စစ်ထမင်းပေါင်းအိုးကဆက်ပြီးအပူပေးပြီးအအေးကောင်းကိုချက်ပြုတ်ရန်သင့်အပူချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားချိန်မှာဆက်ထိန်းထားပေးမှာပါ။
4. Nonstick ဒယ်အိုးဖယ်ရှားနိုင်သည်
အန္တရာယ်ကင်းပြီးအဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောလျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်မှု၏ဒယ်အိုးသည်မီးဖို၊ မီးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မတူညီသောအစားအစာများကိုချက်ပြုတ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူ။ ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကွဲပြားခြားနားသောအိုးအမျိုးမျိုးကိုပြောင်းရန်မီနူးအရသိရသည်။
5. Ergonomic ဒီဇိုင်း
မြင်နိုင်သောထိန်းချုပ်မှုဘူး သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောချက်ပြုတ်နည်းကိုရွေးချယ်ရန် ပို၍ လွယ်ကူသည်။ အိတ်ဆောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းနေ့လယ်စာ box ကိုထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အပူပေးပြားနှင့်အဓိကကိုယ်ထည်၊ မီးဖို (Tritan ပစ္စည်း) အတွက်ကြော်ရန်ဒယ်အိုး။
ရှေ့သို့ လျှပ်စစ်နေ့လည်စာ Box
နောက်တစ်ခု: အိတ်ဆောင် Juicer